လမ်း 2: တွင်အလင်းအိမ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ပျောက်အကြှနျုပျ၏ homies, သူတို့ပြသနိုင်ဖို့သင်လိုအပ်ဒါကြောင့်သူတို့အပေါ်မှာမီးကိုဖွင့်
ငါ coulda လူသိများမှောင်မိုက်လမ်းကြားဆန္ဒချတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့
ငါရာဇပလ္လင်၏ငါ့မျက်မှောက်ပိတ်ဆို့ခြင်း blinders နှင့်အတူတစ် box ထဲမှာသော့ခတ်ခဲ့သည်
ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့, သူသည်ငါ၏အိမျတှငျကအလင်း shined အခါ,
လမ်းကောက်, ပတ်ပတ်လည်လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်, မိန်းမပျိုကိုယ်ရောစိတ်ပါသူမ၏ဆင်းလှည့်
180, ယခုမစုံလဖြစ်ပါတယ်, ငါမူကားပေါ်တွင်နှိပ်ငါအားကောင်းရ
ချစ်ခင်ရပါသောသခင်, ငါတို့လူမျိုးကိုသင်ပစ်ခတ်မှုမြင်ပျောက်ဆုံး, သတ်ဖြတ်မှု
လူစီဖာမြည်းကြိုးကိုဖြည်ကြကုန်အံ့ဘယ်သူသည်? ငါတို့ရှိသမျှသည် duped နှင့်လိုလိုလားလားရှိ
မော်ဂန် • ဒီဇင်ဘာလ 31, 2014 တွင် 1:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kianna • ဇူလိုင်လ 4, 2016 တွင် 8:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယရှေုသညျလှည့်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ယရှေုခရသင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမှမြေကြီးပေါ်ဆင်း လာ.. သူကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဆိုးသောသူတို့အသေခံသေဆုံး. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်လှည့်နိုင်စွမ်းပေးသခင်ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်. ယရှေုသညျကွိုးစားပါ! ငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါသောသင်အာမခံ.